कसले रोक्यो सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदन ? « Etajakhabar – American Nepali News
कसले रोक्यो सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदन ? « Etajakhabar
January 12, 2022 adminLeaveaComment on कसले रोक्यो सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदन ? « Etajakhabar
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सीआईबी०ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले मुद्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आरोप छ। नेपाल र डा। भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि यो मुद्दाको हदम्याद गुजारेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको दाबी छ। सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि मुद्दा नचलाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
गयक याम बरालको दोस्रो बिहे ? लुकाउँदा लुकाउदै पनि बाहिरियो भिडियो
भारतमा एकै दिन एक लाख ९४ हजार जनामा कोभिड संक्रमण « Etajakhabar
बाल गायिका कमला घिमिरेले दोहोरी खेलेर कमाएको पैसाले आफ्नै घर बनाउदै,राजु परियार चकित